Lapha, ekugcineni, kwafika usuku lomshado! Mayelana naye ukuphupha, elinde kuye, ukulungiselela ke. Ngokuqinisekile ngalolo suku ngangingafuni ukucabanga mayelana lapho umshado nabanye amathawula, njengoba izivakashi babehlezi, konke okwanele ukuze nje ukudonsa abangane bahlanganyele imincintiswano, njll njll Yingakho abantu abayoba abasizi yakho - ufakazi futhi ufakazi emshadweni - udinga ukukhetha kusengaphambili, akhethe okuhle.
Into esemqoka - akekho okufanele aphoqwe. Akafuni ukuba?! Futhi ungabi! Khetha kusuka kwamanye nabajwayelene nabo. Ekugcineni, wena akazange aphile isikhathi eside nabo, kodwa kuphela makudle labo futhi intando, futhi bahlele kahle uma lokho. Endaweni yokuqala, lowo ofake isicelo kufanele uchaze ukuthi yini eyenza ubufakazi emshadweni. Akusiwona ophuzayo ngeke isebenze, kodwa futhi umthandi zilale isaladi, futhi, akudingekile. Kuyadingeka ukuchaza. Uma amagagasi umuntu isandla futhi uthi uyazi konke, futhi ngaphandle kwalo, kungcono namanje izindlela lihlale ezungezayo ukuwudlulisela isikhundla salo. Ongeke wazi ngalokho mshado.
The main imisebenzi ubufakazi emshadweni - kuyasiza hhayi kuphela umakoti, kodwa futhi ufakazi. Phela, emahlombe yaso encane elahliwe izinto eziningi kangaka ukuthi ngisho ukhohlwe uzibuka esibukweni! Kuyacaca ukuthi kungcono ukwethula wabeluleki phezulu esizayo.
Uma ucabanga ndawonye umcabango ngokusebenzisa uhlelo olunzima isinyathelo, kuyoba kuhle kakhulu. OFakazi kuphela ukuphothula konke, ukuthenga zasesiteji (futhi uma ungenalo ukwethemba ukunambitheka kwabo, akusiyo ngaphandle usizo lwakho) futhi ekugcineni baba abangane, ukuqonda ukuthi uma udinga pick up - isimo futhi zihlukile. Yiqiniso, kuhle, laba bantu kufanele kube umngani wakho omkhulu, abazidelayo unakekele ngamalanga wakho wamaholideyi. Nokho ubufakazi emshadweni umsizi enkulu ukwedlula ikhanda. Awu ungenza abesifazane ngosuku ngisho pokomandovat?!
Uma ubufakazi eseke ayisebenzi kakhulu, konke kwenza ubufakazi emshadweni, kufanele okungenani kumele zigcinwe zikhona. Lapha Yebo, udinga nje kuphela umfana bejabule futhi ekhululekile esilinganisweni, kodwa futhi kwezomnotho kanye ukuqonda.
Futhi uma umsizi bakamakoti, ubuye fun futhi ukonga abhekana kahle imisebenzi yayo, imisebenzi ubufakazi emshadweni zimi kanje:
usizo ukusatshalaliswa amakhadi isimemo;
ukuhlanganyela ngenkuthalo usathandana;
Iskripthi sokuhlanganiswa, ukulungiselela kanye soglasovka njengesixhumo sezindluzele imenyu;
usizo nokuhlanganyela ngenkuthalo e nokubhalwa futhi kohlelo lokuhlengwa ngaphambi komshado, lapho umakoti intshontshiwe, susa izicathulo nezinye izenzakalo nemincintiswano;
ukufakaza usizo ekuhleleni epikinikini bezihambela ezizungeze umuzi ukulungiswa umzila ;
usizo zihlalo izivakashi edude umakoti nomkhwenyana ahlale izihlobo, bese - abangane.
Njengoba ubufakazi emshadweni kufanele:
ukusiza umakoti ngufakazi kanye sezimbali ehhovisi lokubhalisa futhi uqiniseke ukuthi bangabafokazi umshini bonke kwelinye, okuyinto emva emcimbini ukuya cafe, lapho kuzoba khona bagubha lomshado. Futhi ngenkathi ride zabasha emhlabeni bedolobha kumele okwengeziwe ehlotshiswe lezi imibala. Kuyinto ukukhokhisa i othile izivakashi;
Izindlu zinA a services bamatekisi ezimbalwa, uma kunesidingo, ukuba ngokushesha zihlela imoto ngoba izivakashi;
watch out for izivakashi ehlezi eseduze (ngokuvamile izihlobo abasha) futhi usabela ezidingweni zabo, isibonelo, ukugcwalisa izibuko, izidlo noma ukunikeza umyalo oweta abanganaki;
Yiqiniso, ukulandela umakoti nomkhwenyana, baye konke okudingayo futhi kwaba ke lapho kudingeka;
futhi into esemqoka - ukulandela futhi ahambisane umakoti wakhe akazange ukuntshontsha!
Yiqiniso, le ndlela kuyinto enhle, ekuphileni kwangempela, umuntu onjalo kunzima ngempela ukuthola. Kodwa namanje, ubufakazi emshadweni - lokhu akulona inkanyezi isivakashi, futhi omunye abadlali main, futhi kangcono uma okungenani nengxenye-fit kulezi zici. Bese kuthi-ke ngosuku lwakho lomshado uzokhunjulwa isikhathi eside futhi wena isivakashi.
Sifisela wena ngamaholide ezinkulu, futhi abangane omethembayo!
Ezinye amacebiso okuthi yini eningayifunda ukuze nginike umyeni wakhe a wedding lokhuni
Indlela ukukhetha isipho wedding yokugubha usuku
Hot New Year - ukuthi yini ukupheka?
Indlela ukupheka esiphundu meatball isobho: iresiphi meatballs
Indlela yokusula inqolobane ku-Chrome?
Ubuhlungu Joint: Izimbangela
Steigenberger Aqua Magic 5 * (Egypt / Hurghada) - izithombe, amanani kanye nokubuyekezwa
Ngasiphi engamamitha izindiza flying: esithangamini enemininingwane